Rice Epithalon Acetate powder (307297-39-8) - Phcoker Chemical
SKU: 307297-39-8 Sokajy: Peptide
Rice Epithalon Acetate volo (307297-39-8) video
Rice Epithalon Acetate powder (307297-39-8) Description
Epidalon Acetate vovoka dia peptide ampiasaina mba hifehezana ny tsingerin'ny sela amin'ny alàlan'ny fanaraha-mason'ny hetsika telomerase. Ny endrin'ny amino asidra ao amin'ny peptide dia Alanine-Glutamate-Asparagine-Glycine. Ny fanaovana fikarohana biby dia natao tamin'ny vokatry ny Epithalon momba ny fanafoanana ny tsimokaretina vetivety ary ny karzônôzônzianina hafahafa. Ny fikarohana dia naneho fa ny fomba fihetsika Epithalon dia miteraka fanafoanana ny fanehoana oncogene sy ny fanovàna ny asa atao telomerase. Ny famintinana ny fianarana sy ny fikarohana momba ny telomerase dia omena etsy ambany.
Ny vovonam-bozaka Epithalon dia ampiasaina indrindra mba hampihenana ny famokarana telomerase voajanahary ao amin'ny vatana. Telomerase dia anzima izay hita matetika ao amin'ny vatana mba hiarovana ny ADN. Ny peptide dia mamela ny replication ADN izay manohana ny fitomboan'ny sela vaovao amin'ny alàlan'ny fanarenana ireo sela simba na efa antitra. Ny fianarana 35 taona dia mampiseho fa Epithalone dia iray amin'ireo zavatra vitsivitsy izay mampihetsika ny famokarana Telomerase (telomere terminal transferase) enzyme izay tonga amin'ny fananganana fananganana antitra ary hiaro ny ADN amin'ny aretina sy ny fahadisoana homamiadana.
Rice Epithalon Acetate volo (307297-39-8) Specifications
Product Name Rice Epithalon Acetate volo (307297-39-8)
Anarana simika UNII-O65P17785G;
molekiolan'ny Formula C14H22N4O9
molekiolan'ny Wvalo 390.349 g / mol
Solubility ao amin'ny DMSO, fa tsy anaty rano
Application Epitalon dia afaka mampitombo ny fiainana amin'ny alàlan'ny fanitarana ny telômera sy ny activation telomerase, izy ireo dia mihazona ny vatany matanjaka sy salama.Telomerase (antsoina hoe telomere terminal transferase) dia ny enzyme izay afaka manongotra telômera amin'ny vatan'olombelona, ​​miaro ny ADN amin'ny fahasimbana vokatry ny fahanterana.
Epitalon sy ireo toetra manohitra ny fahanterana. Ny rafilin'i Epitalon dia: Ala-Glu-Asp-Gly. Epitalon dia mampihena ny fiovan'ny taona mifandray amin'ny hery fiarovana sy ny neuroendocrine, izay mampihena ny aretina mitaiza sy ny aretina.
Rano Linaclotide roahina (851199-59-2)
Ny vinaingitra Linaclotide (851199-59-2) dia synthetic, fourteen amino acid peptide and agonist of type guicylate cyclase type ......